कांग्रेसमा युवा नेताले सुरु गरे प्रत्यक्षमा उठ्ने दाबी, बुढा नेतालाई छटपटी ! |
Home समाचार कांग्रेसमा युवा नेताले सुरु गरे प्रत्यक्षमा उठ्ने दाबी, बुढा नेतालाई छटपटी !
कांग्रेसमा युवा नेताले सुरु गरे प्रत्यक्षमा उठ्ने दाबी, बुढा नेतालाई छटपटी !
काठमाडौं – अबको पाँच महिनामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले सकेसम्म कात्तिक मसान्तमा वा मंसिर पहिलो साता निर्वाचन गर्ने मिति तोक्ने तयारी छ ।
त्यसका लागि आयोगले सरकारसँग परामर्श गरिरहेको छ । सम्भवतः आगामी साताभित्रै निर्वाचनको मिति तोकिने भएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले एकै चरणमा हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने बताइसकेका छन् ।
आयोगले निर्वाचनको मिति नतोक्दै अहिलेदेखि नै प्रमुख दलका नेताहरू उम्मेदवार बन्ने तयारीमा लागिसकेका छन् । त्यसमा पनि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनेको बाढी नै लाग्ने देखिएको छ ।
त्यो पनि धेरै काठमाडौंमै देखिएको छ । देशभर प्रतिनिधिसभाको एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र छ । विगतमा दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्र रहेकामा त्यसलाई घटाएर एक सय ६५ मा झारिएको छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट एक सय सांसद निर्वाचित हुनेछन् ।
तर, एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्न यसपटक त्यति धेरै सजिलो भने देखिएको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान, धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जितेपछि स्वतन्त्रको बाढी नै लाग्ने देखिएको हो ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका दर्जनौं युवा नेताहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उठ्ने तयारी गरेका छन् । जसमा प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, मीनकृष्ण महर्जन, कुन्दन काफ्ले, सरिता प्रसाईलगायत मुख्य छन् ।
कांग्रेस नेता पौडेलले तनहुँमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ उठ्ने घोषणा गरेका छन् । उनले तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ रोजेका छन् । जुन रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र हो ।
यस्तै, गुरुराज घिमिरेले मोरङमा महेश आचार्यको निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्ने घोषणा गरेका छन् । उनी अहिलेसम्म एकपटक पनि प्रतिनिधिसभामा उठेका छैनन् । ललितपुरका युवा नेता मिनकृष्ण महर्जनले क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा उठ्ने तयारी थालेका छन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा प्रदेश सभामा उठेका महर्जन यसपटक सकेसम्म प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा जुटेका हुन् । यदि प्रतिनिधिसभाको टिकट नपाए प्रदेश सभा सदस्य उठ्ने उनको रणनीति छ ।
यसपटक कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, डा.रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, विजयकुमार गच्छदारलगायतका वृद्ध नेताहरू समानुपातिकमा बस्ने बुझिएको छ । युवाहरूले टिकट दाबी गर्ने भएपछि उनीहरू संकटमा परेका छन्